Natoka-monina teny amin'ny Hopitaly manarapenitra Andohatapenaka nandritry ny 14 andro ary nanaraka fitsaboana ka sitrana soa aman-tsara. Mpivady izy ireo, ary fantatra fa nody any an-tokantranony ny sabotsy hariva teo.Samy manana andraikitra lehibe ao amin’ny FJKM izy mivady ireo satria ny Pastera Rado Lalaina Johary Robson dia Tonian'ny Sampana Fifohazana, Foibe FJKM, ary ny Pastera Riana Lalasoa Razafintsalama kosa dia mitandrina ny Fjkm Ambatoroka Finoana. Avy namita iraka tany Frantsa izy mivady ireo, niverina teto Madagasikara tao anatin'ilay vanim-potoana tena nidiran’ny coronavirus, ary isan’ireo voa, saingy sitrana soa aman-tsara. Tamin’ity herinandro ity dia efa nisy mpitandrina nandefa hafatra tamin’ny tambajotran-tserasera: hoe sitrana ry zareo fa mety tsy maintsy naka toky tsara aloha ny mpitsabo vao namoaka ny vaovao ofisialy. Nisy ny hafatra fohy avy amin'izy ireo izay noraisina tao amin’ny Heb. 6: 10 manao hoe: "Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany”. Nankasitrahan’izy ireo ny Filohan'ny Repoblika sy ny mpiaramiasa aminy, ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana rehetra, ny Filoha sy Foibe F.J.K.M, ny Filoha sy Foibe Sa.Fi.F. / S.T.K, ny Filoha P.S. sy ny S.T.K. ary SP12, ary ireo namana sy tapaka rehetra tsy nitsahatra ny nitrotro am-bavaka, fa tena valim-bavaka tokoa izao nitranga izao.